HOLY INNOCENTS (MARTYRS)
Nna, umuaka ndi a di nso nyere Gi otito site n’onwu ahuhu ha n’ihi Kristi. Biko mee ka ndu anyi na-agbara okwukwe anyį ji egbirigbeonu anyi ekwuputa akaebe. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …
Ihe Ogugu nke mbu: 1:5-10. 2:1-2
Ihe ogugu ewetara n’Akwukwo Jon nke mbu:
Nke a bu ozi anyi nuru n’onu ya, na ekwuputakwara unu na Chineke bu ihè. O dighi ochichiri obula di n’ime ya. O buru na anyi asi na anyi na ya no n’ezi mmeko ma na-ebi n’ochichiri, o bu okwu ugha. Anyi anaghi ebi ndu n’usoro eziokwu. Ma o buru na anyi na-ebi n’ihè ahu, dika ya onwe ya si noro n’ihè, anyi nwere ezi mmeko n’etiti onwe anyi. Obara Nwa ya bu Jesu ga na-asachapu njo anyi niile.
O buru na anyi ekwuo na anyi emebeghi njo, anyi na-aghori onwe anyi, eziokwu ahu adighikwa n’ime anyi. O buru na anyi ekwuputa njo anyi niile. Chineke onye kwesiri ntukwasiobi na onye na-eme ihe ziri ezi, ga-agbaghara anyi mmehie anyi niile. Anyi kwuo na anyi emebeghi njo, anyi na-eme ya onye ugha. Okwu ya adighika n’ime anyi. Umuntakiri m, ana m edere unu akwukwo a ka unu ghara imehie. Ma o buru na onye obula emehie, anyi nwere onye na-ekwuchitere anyi n’ebe Nna no, ya bu Jesu Kristi onye eziomume. O bu onye e jiri medaa Chineke obi maka mmehie anyi. O bughi naani maka njo anyi kama o bu maka njo nke uwa niile.
ABUOMA NA AZIZA: Ps: 124:2-3, 4-5, 7-8.
Aziza: Anyi gbanariri onya ndi iro anyi kwere dika nnunu si agbapu n’onya dinta.
A si na Onyenweanyi anonyereghi anyi,
mgbe ha lusoro anyi ogu,
Ha gaara elo anyi na ndu,
muo anyi oku, mgbe iwe were ha. Az./
Ide mmiri gaara eri anyi,
ebili mmiri gaara ekpudo anyi,
mmiri ahu na-ekwo gaara eri anyi. Az./
O gbajiri onya ha,
anyi wee nwee ike gbalaga.
Enyemaka anyi di n’aha Onyenweanyi
onye mere eluigwe na ala. Az./
Anyi etoo gi, Chineke: Anyi na-ekwuputa gi dika Onyenweanyi, igwe ndi egburuegbu n’ihi okwukwe n’etoo gi. ALLELUIA.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma di aso nke Matiu dere:
Mgbe ndi amamihe ahu labara mmuoma nke Onyenweanyi biakwutere Josef na nro si ya, “Bilie, kporo nwata ahu na nne ya gbaga Ijipt. Noro ebe ahu, ruo mgbe m ga-agwa gi, n’ihina Herod bu n’uche icho nwatakiri ahu ka o gbuo ya.” Josef biliri kporo nwata ahu na nne ya n’ime abali gbaga Ijipt. O no ebe ahu ruo mgbe Herod nwuru. Nke a bu iji mejuputa ihe Dinwenu kwuru site n’onu onye amuma si, “E siri m n’ljipt kpopota nwa m.” Mgbe Herod huru na ndi amamihe ahu aghogbuole ya, onuma juputara ya obi. O nyere iwu ka e gbuo umuaka niile no na Betlehem na n’ala gbara ya gburugburu bido na ndi gbara afo abuo gbadataba, dika oge o juputara ndi amamihe ahu siri gosi ihe onye amuma Jeremaya kwuru, si, “A nuru olu na-eti mkpu ma Rama, Rachel na-ebere umu ya akwa. O jula i nara nkasiobi n’ihi na ha adighikwa.”
Dinwenų, I na-enye anyį ndu Gi obuladi tupu anyi enwee nghota. Nara onyinye ndi a anyi ji įhunaanya na-ehunyere Gi ma tohapu anyi na njo anyi. Anyi na-ario ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyi. Amen.
Dinwenu, site n’ikwuputa okwukwe na Nwa Gi n’ekwughi okwu obula, umuaka ndi di nso ritere okpueze nke ndu n’omumu Ya. Biko mee ka mmadu niile ndi natara onyinye nso Gi n’ubochi taa ketakwa oke nzoputa n’uju. Mezuoro anyi ihe ndi a site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.